မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ အစည်းအရုံး မှ သီချင်း ၇ ပုဒ် | ဒီရေ
မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ အစည်းအရုံး မှ သီချင်း ၇ ပုဒ်
ကျနော်တို့ Generation Wave (မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ အစည်းအရုံး) မှသီချင်း ၇ ပုဒ်ပါခွေ တစ်ခွေကို ရေးစပ် သီဆိုပြီး ဖြန့်ချိ မျှဝေလိုက် ပါသည်။ အချို့သော အခက်အခဲ များကြောင့် နောက်ကျပြီးမှ ဖြန့်ဝေ နိုင်ခြင်းကို ခွင့်လွှတ် နားလည် ပေးပါရန်လည်း မေတ္တာ ရပ်ခံ အပ်ပါသည်။ သီချင်းများကို နားဆင်ရန် အတွက် အောက်ပါ လင့်များ၌ download လုပ်၍ နားဆင် နိုင်ပါသည်။
3.) (အမေ ၆၄)
7.) (ခွင့်ပြုတော့ မေမေ)